Skype 4.0 ho an'ny Linux vaovao avy ao anaty lafaoro | Avy amin'ny Linux
Nano | | fampiharana, GNU / Linux, About us
Ary tsia, tsy manao vazivazy aho, matotra aho, androany 14 Jona 2012 kinova 4.0 an'ny Skype ho an'ny Linux miaraka amina mari-trano 32 bit sy 64 feno (tsy misy tranomboky 32-bit), azonao an-tsaina ny fahatairako rehefa nahita ny vaovao ao amin'ny G +.
Andao ho tonga amin'ny teboka:
Voalohany indrindra, nilaza izy ireo fa nandritra ny fotoana maharitra beta dia namela azy ireo hanangona fanehoan-kevitra momba ny bibikely LEHIBE izay nanitsian'izy ireo ny ankamaroany, ary eto hoy izy ireo:
Mazava ho azy fa manana fanatsarana kely sy fanamboarana kely hafa izahay. Araka ny azonao an-tsaina, lava loatra ilay lisitra ka mila fotoana be loatra hanoratana azy rehetra, fa ny sasany kosa mendrika hotononina:
Manomboka amin'ny fanovana lehibe ...
Hahita fiovana lehibe efatra ianao amin'ity famotsorana ity:
Izahay dia manana fijerena resaka vaovao izay ahafahan'ny mpampiasa manara-maso ny fifampiresahany amin'ny varavarankely mitambatra. Ireo mpampiasa izay tia ny fomba fijery taloha dia afaka manafoana izany amin'ny safidin'ny Chat;
Manana Call View vaovao izahay;
Ny kalitaon'ny antso dia tsy tsara noho ny fampiasam-bola maro nataonay tamin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny feo;
Ary niasa tamin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny antso an-tsary izahay ary nanolotra fanohanana bebe kokoa ho an'ny fakantsary bebe kokoa.
Izay adika dia:
Manana fomba fijery resadresaka vaovao izahay izay ahafahan'ny mpampiasa mijery ny resak'izy ireo amin'ny varavarankely mitambatra (amena!). Ireo mpampiasa izay tia ny fomba fijery taloha dia afaka manafoana ilay vaovao fotsiny amin'ireo safidy.
Manana fiantsoana antso vaovao izahay.
Ny kalitaon'ny antso dia nisy fanatsarana kalitao mbola tsy nisy toa azy (amin'ny Skype ho an'ny Linux) noho ny fikarohana be dia be.
Ary izahay koa dia miasa amin'ny fampiharana kalitao tsara kokoa amin'ny antso an-tsary, ary manitatra ny fanohanan'ny fakantsary bebe kokoa (Andriamanitra ô, AMEN!).
Misy ihany koa ny lisitry ny fanovana "madinidinika" izay nampiharina:
fanatsarana ny fampifanarahana chat
fisehoana vaovao sy sary an-tsaina emoticon
ny fahaizana mitahiry sy mijery ny nomeraon-telefaona ao amin'ny piraofilin'ny fifandraisana Skype
ambany dia ambany ny fianjadian'ny Skype na Linux
haingana kokoa ny fandefasana ny tantaran'ny chat ankehitriny
fanohanana fiteny vaovao roa: Czech (saina: cz) sy norveziana (saina: tsia)
Inona no mety:
Fahaizana mahita nomeraon-telefaona amin'ny fifandraisana.
Tsy dia misy firy ny hatsiaka amin'ny app.
Haingana be kokoa ny tantaran'ny chat.
fanohanana fiteny vaovao roa: Czech sy norveziana
Ity dia tsy isalasalana fa ny vaovaon'ny volana raha ny amin'ny Linux, tsara fotsiny, tonga ny fotoana hanandramana azy ary hijerena izay fientanam-po vokatr'izany, manantena aho fa manana io toetra io izay nampanantenain'izy ireo, satria avelako izao ny rohy fampidinana eto, mba ho velona izy ireo.
Inona ny hevitrao? Hampidina azy io ve izy ireo? Sa very fotsiny ny finoan'izy ireo Skype?
loharanom-baovao: Blog Blog Skype
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Skype 4.0 ho an'ny Linux vaovao avy ao anaty lafaoro
Taorian'ny tsy fahitana azy (aretina ratsy: U) sy ny fandehandehanana nandravaka ny solosaina (fotoana malalaka be lol, ireo izay manaraka ahy amin'ny tweeter dia mahalala izay lazaiko) ary namono ny totozy toy ny in-6 tao amin'ny LMDE amin'ity herinandro ity (compiz and conky they are my nemesis ... fa ny ahy dia ny manintona sy mandehandeha, fa tsy manova ireo zava-dehibe amin'ny OS xD) vakio ity ... mahafinaritra izany!
Efa apetrako ao amin'ny LMDE raha vantany vao velomiko ny totozy lol
Handefa izany aho izao.
Manantena aho fa tsy ho ela dia ho hita ao amin'ny Arch repos, fa mandritra izany ...
Esoriko izay nolazaiko, alaiko avy any AUR izany. fa avy amin'ny tranokalan'ny Skype dia tsy misy afatsy ny Ubuntu, Debian, Fedora ary OpenSUSE
Efa ao amin'ny repo ofisialy 🙂
nerjamartin dia hoy izy:
Mamiratra !!! Tsy nampoiziko fa aorian'ny fividianana Skype an'i Microsoft dia hanohy ny fivoarany ho an'ny Linux !!! vantany vao tonga any an-trano aho dia misintona azy 🙂
Mamaly an'i nerjamartin
Ary raha ny marina dia mandeha tsara ... io no zavatra mahaliana, fitsapana azy ary tonga lafatra ho ahy xD
matotra? hampidina azy yaaaaaaaaaaaaa
Mahaliana ary manandrana azy misaotra tamin'ny fanaovana tatitra.
Ufff… ho an'ny Fedora 32 bit, tsy ampidiniko.
Ahoana no nametrahanao azy?
ny fonosana 32-bit dia alaina ary avy eo "yum install packagename.rpm". yum dia hametraka automatique ireo fiankinan-doha amin'ny fonosana 32-bit hiasa amin'ny rafitra 64-bit.
Efa naheno / namaky ve ianao fa hametraka doka amin'ny antso an-tsary ny skype? http://www.fayerwayer.com/2012/06/skype-insertara-imagenes-publicitarias-durante-las-llamadas-de-audio/
Tsy tsara izany, saingy satria saika tsy miantso video aho fa amin'ny feo (avelako any amin'ny hangout google ny antso an-tsary) dia tsy misy sarotra amiko.
Tsy hitako fa diso, natao ho an'ny antso an-peo fotsiny fa tsy antso video xd
Skype dia namoaka “doka fifampiresahana”, doka izay hiseho mandritra ny antso am-peo ataon'ny olona roa mampiasa ny serivisy.
Fa inona no vintana, amin'ny fotoana voalohany nametrahako linux (sabayon manokana) amin'ny pc tsara ananako ary mivoaka ny skype 4.0 dia tsy nety tsara kokoa.
Efa nanandrana azy aho ary na ny webcam aza dia mety amiko, zavatra izay tsy namboarin'ilay kinova taloha 😀
Raha azoko atao ny mametraka ny zazavavy amin'ny cam! (6)
Ao amin'ny tranonkala dia misy script izay ahafahanao mamaha ny olan'ny webcam amin'ny Skype 2.2.
Algabe dia nampidina ny 32-bit ho an'ny Fedora ve ianao ary nametraka izany tamin'ny rafitra 64-bit?
Eny, ny marina raha mampiasa azy aho, mazava ho azy miankina amin'ny olona iresahanao. Ho fanampin'ilay fampiharana voalaza dia mampiasa serivisy Ekiga, Gtalk, ary Empathy aho. Toa vahaolana tsara dia tsara foana ho ahy izany satria mamela hanana sehatra marobe (amin'ny ankapobeny) multiplatform ahafahana mifampiresaka tsara kokoa eo amin'ny mac, handresy ary ny linux tsy misy olana be loatra sy tranomboky ho an'ity na izatsy.
Tsy mbola nanavao azy aho ary efa ao amin'ny toeran'ny Arch Community. Vao tonga tany an-trano aho dia nanavao azy ary nanandrana azy. Manantena aho fa hihatsara izy ireo ary nanitsy ireo pitsopitsony kely izay nananan'ny kinova teo aloha.
Jo, novakiako io ary tsy hitako izay. Io ilay vaovao tsy nampoiziko indrindra.
Azoko atao ve ny manazava amiko ny antony mahatonga ireo izay mampiasa distro miaraka amina fonosana .deb manana ny dikany 64-bit mifandraika amin'izany, ary ireo manana fonosana .rpm tsy manana?
Tsotra izany, satria i Ubuntu aza ao anaty lasopy. Tsy mampidina azy io ho toy izany koa aho, ary tsy adala ny mametraka ny Fedora 32 indray, miaraka amin'ny fahombiazany amin'ny 64.
Tompokolahy, misy fiankinan-doha amin'ny 32bits ka hatramin'ny 64bits ao Fedora, aza rendrika ao anaty rano vera xD
Fa misy ireo maniry, tsy tiako ny mihazakazaka fampiharana 32 mihoatra ny 64, efa nanana traikefa ratsy tamin'io entana kely io aho. Miarahaba.
Tsy mbola nanana an'izany olana izany aho, tsy maintsy milaza aho hoe xD
Juan Carlos Ny tiako holazaina dia tsy hampiasa skype mihitsy ianao satria tsy misy kinova 64-bit ho an'i Fedora?
Tokony hanontany an'ireo namorona fonosana ianao. Ary heveriko fa izany dia vokatry ny lazan'ny fizarana izay mampiasa fonosana .deb. Raha holazaina ny ubuntu, mint, ny "derivatives" an'ny ubuntu, debian GNU / Linux, sns.
Misaotra, grazie, microsoft, mihazakazaka misintona azy aho, farany, tsy tokony hampiasa an'io beta xD maharikoriko io aho ...
Etsy andanin'izany, misy mahalala ve hoe inona no / an'ny tetik'asa Free Skype (tsy afangaro) sy ny GNU Free Call?
inona no vaovao tsara ..
hametrahana azy amin'ny ubuntu sy linux mint dia mila esorinao ilay kinova taloha ary ampidino ny fonosana .deb vaovao ary apetaho amin'ny tanana ??
Eny, heveriko fa napetraka be loatra amin'ilay kinova xD taloha
Heveriko fa? Tokony handray ny fitsapana ianao mba hanomezana ny hevitrao fa tsy handehandeha hiteny zavatra izay mbola tsy nandramanao.
Tsy tiako ny manao azy, ankoatry ny fisian'ny tontolon'ny solosaina rehefa mametraka programa izay mametaka ny kinova taloha ianao, dia ajanony ny trolling, angamba rehefa manavao maimaimpoana ianao amin'ny sudo apt-mahazo manavao ny fijanonana taloha? ka?
Izaho koa efa nilaza fa mino aho, raha te hino azy tsara ianao nefa koa 🙂 valala kely !!!
Raha ny marina dia nanome olana ahy tamin'ny fametrahana ireo mpiara-miasa canonika io ary tsy fantatro izay tsy hita, nesoriko ilay kinova taloha ary dia izay.
Mampiasa ubuntu ianao: 0
Toy izany koa !!
Tena mety amiko izany .. esory ny kinova taloha ary kitiho indroa ny fonosana alaina ..
mandeha tsara 😀 😀
Ny kaontiko dia: jamin-samuela ho an'izay te-hanampy ahy
Napetrako eo amboniny tsy misy olana izany, saingy misy olona tsy nahomby tamin'ity fomba ity. Ny zavatra tsara indrindra dia ny manaisotra ilay taloha ianao ary tsy hanana olana.
Manana fanontaniana vitsivitsy aho:
Raha beta ny dikan-teny teo aloha, aiza no azo antoka ny kinova 2.2?
Aiza ny kinova 3?
Te hampakatra haingana ny isa fanontana ve ianao mba tsy hijery lavitra azy ao ambadiky ny kinovan'ny OS hafa?
Aza mamaly an'ity fanehoan-kevitra ity
Te-hanondro fotsiny ny hadisoana fandikan-teny mahazatra any amin'ny faran'ny lahatsoratra aho. Rehefa miresaka norveziana sy tseky izy dia mandika "fiteny" avy amin'ny anglisy ka "fiteny" amin'ny teny espaniola. Ny "dikanteny" na "fiteny" no dikanteny marina. Ny teny hoe "fiteny" dia misy dikany hafa amin'ny teny espaniola, raha amin'ny teny anglisy kosa dia "fiteny" dia manambara ireo hevitra roa: ny fiteny sy ny fiteny.
Razetsu dia hoy izy:
Okay, fa eto dia mampiseho fa mitovy hevitra izy ireo:
Mamaly an'i Razetsu
Tiako io, tiako io! (* w *)
kanibalita avy amin'ny miami dia hoy izy:
Mahafinaritra izany!!! Tena mandeha tsara !!!! mahamenatra ny tsy fananako mpifandray mampiasa skype ...
Mamaly an'i kanibal avy amin'ny miami
Kai dia hoy izy:
Izaho dia efa nametraka azy ary mandeha tsara fotsiny izy rehefa mihetsika ny antso dia tsy afaka mamoaka feo hafa aho. Tsy maintsy olana ara-maritrano izany raha heveriko fa xD mampiasa Fedora 17 64bits ary misy andiany 32 fotsiny ho an'ny Fedora -.-. Manantena aho izao raha mahazo 64 fonosana ilay fonosana!
Mamaly an'i Kai
GIMP 2.8 Mendrika ny fiandrasana ve?